काठमाडौं । आइतवार शेयरबजार सूचकांक र कुल बजार पूँजीकरणले सर्वाधिक उचाइको रेकर्ड कायम गरेको छ ।
आइतवार नेप्से परिसूचक ४१.२४ अंकले बढेर २२३५.७२ को आजसम्मको सर्वाधिक उच्च विन्दुमा पुगेको छ । त्यसैगरी शेयरबजारको आकार रू. ३० खर्ब ११ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ७४ हजारको भएको छ ।
गत बिहीवार रू. २९ खर्ब ५५ अर्ब ८६ करोड ४० लाख ६५ हजार रहेको कुल बजार पूँजीकरण आइतवार एकै दिन रू. ५५ अर्ब ५५ करोड २० लाखले बढेर सर्वाधिक बन्न पुगेको हो ।
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७ दशमलव २१ अंकले बढेर ४२८ दशमलव ४३ बिन्दुमा पुगेको छ ।
यसै गरी फ्लोट इन्डेक्स ३.५५ अंक र सेसेन्टिभ फ्लोट इन्डेक्स ३.०३ अंकले बढेको छ ।